Buugaagta Dalxiiska ee Bhitarkanika Nagala soo xiriir: 993.702.7574
Bhitarkanika National Park waa habka labaad ee deegaanka ee Hindiya. Sanduuqa cows Dalxiiska Bhitarkanika wuxuu kuu ogolaan doonaa inaad la kulanto quruxda caanka ah ee qoyaanka. Dhulka dhulgariirka cagaaran, shimbiraha iyo dhoobada, yaxaasyada qamriga, qulqulaha biyaha, hareeraha hareeraha ku hareeraysan ee shimbiraha shimbiraha iyo dabeecadda dabiiciga ah, waxay soo gelisaa dadka soo booqda meelo ka fog iyo meelaha fog fog si ay u dhistaan ​​meelahan gaarka ah ee dalxiiska . Cilmi-baadhayaasha, Culimada, Dabeecadda Dabeecadda iyo Dalxiisayaasha waxay leeyihiin cunto badan oo loogu talagalay fikirka iyo sahaminta. Bhitarkanika Dalxiisku wuxuu daboolayaa dhammaan dhinacyada xiisaha leh. Meeshu waxay u taagan tahay mid ka mid ah abuurnimada ugu fiican. Bhitarkanika waa deegaan gaar ah oo ah Mangrove Forests oo la jaray dhismooyin badan iyo guryo dabacsan oo ku yaal degmada Kendrapara ee Odisha. Mid ka mid ah hannaanka ugu wayn ee Mangrove ee Hindiya, Bhitarkanika wuxuu ku yaallaa flor iyo faunas kala duwan. Iyada oo Sandbirdoonka Qalabka Hubka ee Bhitarkanika baakadaha dalxiiska aad ka heli karto xiisaha aad raadineysay. Kala duwanaanta biyu-gaar ah ayaa soo jiidata dadka soo booqda dabiiciga dabiiciga ah. Beerta Qaranka ee Bhitarkanika xayawaan, kalluunka boodhka, dhirta qoyan, dhirta duurjoogta ah, maqaarka caleenta ah, sambar, jasiirad, bacam, juus ah juus ah, yaxaas, quuto, kareer, kareem, marin , qoryaha warshadaha, hornbill, bare-madaxa, Brahmani duck, pintail, baalal-dheere cad, khariidad, qoryaha, wadooyinka iyo noocyada kala duwan ee shimbiraha deggan iyo shimbiraha. Sidaa darteed, adigoon u sii dheereyn, bacahaaga u dalbo safarkan xiisaha leh ee Sand Webles Bhitarkanika Dalxiis.
Xaggee Joogtaa: Sandbalka Pebbles Bhitarkanika Jungle Resorts ee Beerta Qaranka ee Bhitarkanika waxay bixisaa hoy ku-meel-gaadh ah oo leh tas-hiilaad deg-deg ah habeenkii.
- XADIISKA MAGAALADA 14 (Sariir laba-laab, Sariir saddex Jibbaar ah, Afar Sarreysa).
Guryo ciriiri ah (Non-AC) ee teendhooyinka Swiss oo ku yaal AP iyo Qorshaha MAP.
Sandbalka Pebbles Bhitarkanika Jungle Resorts waxay bixisaa baakado faa'iido leh oo loogu talagalay gaar ahaan dalxiisayaasha - labadaba guriga iyo dibaddaba.
Heerka Rakaabka:Qiimaha Guriga: INR: Per Night Laga soo bilaabo 01st Aug 2018 ilaa 31st July 2019.
WAXYAABAHA LAGU DHALAN YAHAY
quraac + (qado ama casho) quraac + qado + casho
Heerarku waxay ku jiraan dhammaan canshuuraha. (Marka laga hadlo isbedelka mustaqbalka).
Carruurta ka hooseeya da'da 5 da'da waa bilaash.
Goobtani waxay ku xiran tahay helitaanka.
Qalabka Isboortiga Swiss-da ah ee Sandbush Qalabka Bhitarkanika Jungle Resorts (Bhitarkanika National Park).
Beerta Qaranka ee Bhitarkanika waxay ku dhowdahay 01st Maajo ilaa 31st July oo loogu talagalay Niyadjabinta iyo Buul-jiifka degaankeeda iyo dib-u-furitaanka dalxiisaha laga bilaabo 01st August sannad kasta.
Qiimaha ka sarreeya looma adeegsan karo Sabtiyada. Baakadaha kale ayaa laga yaabaa inay diyaar u noqdaan.
Riix Halkan Soodejinta / Nidaamka Kawnida.
1 am block qoraalka. Guji edit button in la beddelo qoraalka this. Lorem dolor ipsum amet fadhiisan, elit adipiscing consectetur. Ut elit elit, luctus NEC Mattis ullamcorper, pulvinar Leo dapibus.
Adeegyada iyo Adeegyada: Xirmooyinka Nadaafadda, Hudheelada iyo Cuntada Nadiifinta, Qalabaynta, Kalluumeysiga Suuliga (Available Angling), 24-saacadaha biyaha, Xarumaha kuxirsan, Goobta Xarunta, 24-saacadood Koronto qaboojiyaha, Dayactir casri ah, , Gacan-siisid Diyar-la'aan Kiro, Dib-u-kicinta / Ka-soo-degitaanka Kalluumeysiga (oo keliya Gelitaan / Ka bax)
Hawlaha iyo Adeegyada la bixiyo: Guryaha Casriga ah, Cuntada ugu fiican leh iyo nadiifinta Cuntada, Gawaarida Baaskiilada, Boodfire, Dhaqdhaqaaqa, Dhacdooyinka Shirkadaha, Gaar-socodka, Dibadda, Hawlaha Dhisidda Kooxaha & Kulannada Kicitaanka, Kusoo Baxnaansho Muhiim ah.
Sifooyinka waaweyn: Shimbiraha 170 noocyada kala duwan, 08 noocyada quruxda badan ee Kingfishers, Saldhigga Bukuladda, Baalalka Boodka, Qoryaha, Boodaha Sanduuqa, Gubollada, Teastaha Daqiiqada, Boodka badda, YNUMX-foot Yaxaasyo (Kaaliyya), Yaxaasyo Caan ah (Gauri), Yaxaasyada Iskudhiga ah ee Mudflat, Dareemaha Dareeriga ah, Khaanadaha Duurjoogta ah, Kormeeraha Labbiska, King Cobra, Pythons
Qodobbada Gelitaanka: Khola iyo Gupti ayaa ah labada qodob ee ugu muhiimsan ee lagu soo galo Beerta Qaranka ee Bhitarkanika. Booqdayaasha waa inay ka qaataan ogolaanshaha ka soo galista Xuddunta Koodhka ee Xerada Xoolaha Khamriga iyo Gupti. Doonyahannada Gaarka ah ayaa laga heli karaa labada meeloodba. Kalluumeysiga Gaarka ah ayaa sidoo kale laga heli karaa JAYANAGAR & CHANDBALI. Dhibcaha soo gala waxay si fiican ugu xiran yihiin magaalooyinka waaweyn ee Odisha.
Bhubaneswar - 160 KMS si ay u soo galaan Khola / Gupti
Cuttack - 140 KMS si ay u soo galaan Khola / Gupti
Bhadrak - 70 KMs si ay u galaan Jayanagar Via Chandbali
Saldhigga Ugu dhow ee Tareenka:
Laga soo bilaabo Bhadrak - 70 KMs ilaa Jayanagar
Laga soo bilaabo Cuttack - 140 KMs ilaa bartamaha Khola / Gupti
Laga soo bilaabo Bhubaneswar - 160 KMs ka soo galaan Khola / Gupti
Madaarka ugu dhow: Bhubaneswar